Uzahlula njani ubunyani beziNxalenye eziZenzekelayo
ngomphathi ku 20-09-08
Uninzi lwezinto ezibizwa ngokuba zii-GM zentsusa kwisiXeko esiZenzekelayo, intengiso kunye ne-Intanethi azikho. Imali yomhadi ayitsho, zonke izinto ezingezizo zifakwe emotweni, kuyakubakho ingozi yokhuseleko! Kukwakho nezinto ezininzi zokuncedisa ekubuyiseleni "ekuphindweni ngokutsha" kwezinto ezilahliweyo zeemoto. Kulapho ...
Umgaqo wokuhluza i-Fuel kunye nokuGcinwa kwesihluzi se-Fuel
Kubalulekile ukucoca isihluzo samafutha. Icebo lokucoca ulwelo lamafutha liqhagamshelwe kumbhobho phakathi kwempompo yamafutha kunye nokungena komzimba wevalvey yokunyusa. Umsebenzi wecebo lokucoca ulwelo kukususa i-oxide yentsimbi, uthuli kunye nokunye ukungcola okuqinileyo okukulo mafutha, kuthintela inkqubo yezibaso ...
Umsebenzi kunye neMigaqo yokuSebenza yePompu yeFutha yePetroli
Impompo ipetroli idlala indima indawo injini. Ke ukuba uxinzelelo lweoyile yepom yepetroli ayonelanga, ziziphi iimpawu eziza kuvela? Yimalini uxinzelelo lwempompo yepetroli njengesiqhelo? Iimpawu zepompo yeoyile engonelanga kwimpompo yepetroli Ukuba uxinzelelo lwepetroli ...
FUMANA AMANQAKU AXASHA KUSI
Imephu yendawoImpompo yaManzi iMercedes-Benz, Impompo yamanzi eMercedes-Benz, CUMMINS Injini yaManzi Pump, Impompo yamanzi yeCummins, Impompo yamanzi, Impompo yamanzi eMercedes-Benz,
Yongʻan Industry Park, Xianju County, Taizhou, China